ကျော်မောင်(တိုင်းတာရေး) | MoeMaKa Burmese News & Media
ညိုထက်ညို ● တဖန် ပြန်လည်နိုးထနိုင်ခြင်းမရှိသောဝေဒနာ
>Su Su Nway at Rgn airport
>journal pieces on Feb 10
အမေရိကရောက် ရွှေမြန်မာများ၏ တောင်တန်းသာသနာပြုအလှူ
Posts Tagged ‘ ကျော်မောင်(တိုင်းတာရေး) ’
ကျော်မောင်(တိုင်းတာရေး) ● ကားပေါ်မှာ ကားပေါ်မှာ (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဖြစ်တဲ့ မနှစ်က သင်္ကြန်မကျခင် ရန်ကုန်ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် စာအုပ်ဆိုင်တွေရှိရာ လှည်းတန်းတ၀ိုက် ခြေဦး လှည့်မိပြီးတဲ့နောက် အိမ်ပြန်ဖို့အတွက် ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်ရှိရာကို...
ကျော်မောင်(တိုင်းတာရေး) – ဆံပင်ညှပ်တုန်းက
ကျော်မောင်(တိုင်းတာရေး) – ဆံပင်ညှပ်တုန်းက (မိုးမခ) မတ် ၂၇၊ ၂၀၁၅ တလတခါ ဆံပင်ညှပ်ခံဖို့ အစီအစဉ်မှာ ဟိုးငယ်စဉ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကပင် စခဲ့သည်။ ဆံပင်ကလည်း တလလောက်ဆိုလျှင် အတော်ရှည်လာတတ်သည်။ မအားတဲ့အခါမျိုးတွင် နှစ်လသာသာဖြစ်သွားခဲ့လျှင် ဆံပင်မှာ ဂုတ်ထောက်လျက်ရှိပြီး...
ကျော်မောင်(တိုင်းတာရေး) – အသုံးကျရဲ့လား …. စာအုပ်အဖုံး ဖုံးခြင်း
ကျော်မောင်(တိုင်းတာရေး) – အသုံးကျရဲ့လား …. စာအုပ်အဖုံး ဖုံးခြင်း (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၊ ၂၀၁၅ ကြုံခဲ့ရတာလေး ပြန်အောက်မေ့မိတယ်။ တနေ့တော့ အတန်းပိုင်ဆရာမက မှာလိုက်တယ်၊ မနက်ဖြန် စာအုပ်တွေ အဖုံး...
ကျော်မောင်(တိုင်းတာရေး) – ညောင်ကန် ထမ်းပိုး နှင့် ဒိုးလေး
Photo Aung Htet ကျော်မောင်(တိုင်းတာရေး) – ညောင်ကန် ထမ်းပိုး နှင့် ဒိုးလေး (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၄ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲဖြေပြီးနောက် အောင်စာရင်းစောင့် တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ စောင့်နေသော...
ကျော်မောင်(တိုင်းတာရေး) – ဗာလာနံ
ကျော်မောင်(တိုင်းတာရေး) – ဗာလာနံ (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၄ နယ် မြို့လေးမှာ အဖိုးအဖွားတွေ ရှိတုန်းက နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်ဆို ဦးလေးတွေက နယ်ကို သင်္ဘောဖြင့် လိုက်ပို့သည်။တစ်နှစ်တွင် ဖိုးဖွား...
ကျော်မောင်(တိုင်းတာရေး) – အသုံးကျရဲ့လား … အင်တာနက်
ကျော်မောင်(တိုင်းတာရေး) – အသုံးကျရဲ့လား … အင်တာနက် (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၄ အင်တာနက်အစ ရုရှက စပွတ်နစ်ဂြိုလ်တု(Sputnik)ကို (၁၉၅၇) ခုနှစ်တွင် အာကာသထဲရှိ ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ စတင် ပစ်လွှတ်လိုက်ရာ ထိုစဉ်က...
ကျော်မောင် (တိုင်းတာရေး) – ပလုံ ပလုံ ပလွတ်
ကျော်မောင် (တိုင်းတာရေး) – ပလုံ ပလုံ ပလွတ် (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၄ ရာဇ၀င်စာအုပ်များ၊ သမိုင်းစာအုပ်များ၊ သမိုင်းနောက်ခံဝတ္ထုတို ၀တ္ထုရှည်များ ဖတ်နေစဉ် ကာလ။ လူကလည်း တက်လူ၊ ဆယ်ကျော်သက်ပိုင်း...
ကျော်မောင်(တိုင်းတာရေး) – ၃၆နှစ် ကျွန်တော်နှင့် နှစ်၃၀ အတွေးအမြင်
ကျော်မောင်(တိုင်းတာရေး) – ၃၆နှစ် ကျွန်တော်နှင့် နှစ်၃၀ အတွေးအမြင် (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၊ ၂၀၁၄ စင်ကာပူတွင် ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးဖို့ မြန်မာသံရုံး (စင်ကာပူ) ကို ပြီးခဲ့တဲ့...